Root sy Recovery amin'ny Samsung Galaxy S3 miaraka amin'ny Android 4.1.2 | Androidsis
Samsung Galaxy S3, Root ary fanarenana amin'ny Android 4.1.2
Francisco Ruiz | | Fanarenana Android, Android Root, Samsung, Tutorials
Amin'ity lesona manaraka ity dia hampianatra anao amin'ny fomba tena tsotra aho faka ary apetaho ao amin'ny Samsung Galaxy S3 modely GT-I9300 miaraka amin'ny kinova an'ny Android 4.1.2.
Ity fampianarana ity dia hanompo ireo mpampiasa rehetra izay, noho ny tahotra sao misy puce tsy misy kilema ary mety hisy fiatraikany amin-dry zareo ilay puce dreaded maty tampoka, nohavaozin'izy ireo tamim-pomba ofisialy ny terminal misy azy ireo amin'ilay kinova firmware voalohany Samsung, koa via OTA or via Kies.
1 Dingana teo aloha
2 Ahoana ny fomba hanongorana ny Samsung Galaxy S3 Android 4.1.2
Dingana teo aloha
Ny zavatra voalohany tokony hataontsika dia ny mametraka ireo mpamily ho an'ny terminal amin'ny PC-nao, raha efa nametraka ianao Kies ary nampifandraisinao ny telefaona indraindray ary apetranao tsara, raha tsy izany, ny zavatra voalohany tokony hatao dia ny misintona sy mametraka Kies avy amin'ny ny tranonkala Samsung ofisialy.
Vantany vao tafapetraka sy ekena ny terminal anay hamerina ny PC izahay ary hanohy ny dingana manaraka izahay.
Avy amin'ny Samsung Galaxy S3 hampavitrika ny debugging USB hita ao amin'ny Development options isika, avy eo hamono ny terminal ary hanohy ny dingana manaraka.
Manaraka izany dia halefanay ny CFRoot avy amin'i Chianfire y Odin, raha vantany vao ampidinintsika izy ireo, dia hofongorantsika izy ireo na aiza na aiza amin'ny PC-tsika, kokoa ny desk.
Ahoana ny fomba hanongorana ny Samsung Galaxy S3 Android 4.1.2
Hamoaka izao izahay Odin ary hanaiky ny alalana izay angatahinao izahay, dia hahita efijery toa ilay napetraka etsy ambany izahay:
Tsindrio ny bokotra milaza hoe PDA ary safidio ny fisie .TAR mifanaraka amin'ny CFRoot alaina ary vonoina ny zip.
Tokony hitandrina tsara isika ary hizaha ilay boaty RE-Fisarahana tsy voamarina, Miverina aho, Ny fizarana RE dia tsy tokony hojerena, ny boaty Auto Reboot sy F.Reset Time ihany.
Hodinihintsika izao ny Samsung Galaxy S3 Amin'ny maody fampidinana, hanaovana izany, manomboka amin'ny finday dia hodinihintsika amin'ny alàlan'ny fanindriana miaraka ary tsy hamoahana ny bokotra volume miampy ny bokotra Home na fanalahidy afovoany ary Power,
Mampifandray azy amin'ny PC izahay ary rehefa fantatry ny Odin dia hanery ny bokotra izahay Start ary avelantsika ho vita ilay asa.
Vantany vao vita ny finday dia hanomboka indray isika ary ao Odin dia hiseho eo amin'ny ilany ankavanana ambony ny teny Pass.
Hanamarina fa ny Root marina fa afaka miditra ao amin'ny vatasarihana fampiharana an'ny Galaxy S3 ary zahao raha napetraka ny rindranasa Supersu.
Fanazavana fanampiny - Samsung Galaxy S3, ny fomba fanamboarana ny olan'ny fahafatesana tampoka
Ampidino - Odin, CFRoot Galaxy S3, Kies
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Samsung » Samsung Galaxy S3, Root ary fanarenana amin'ny Android 4.1.2
122 hevitra, avelao ny anao
Handelson dia hoy izy:
Salama manana samsun glaxy s3 t999 aho ary mbola tsy navoakan'izy ireo ilay rom ofisialy ho jelly bean 4.1.2 ary na ireo mpamorona ny Rom aza tsy nanao izay maharesy lahatra ahy, azonao atao ve ny milaza amiko raha misy ny Gmail-ko. fhir27@gmail.com
Mamaly an'i Handelson
santiagp martinez dia hoy izy:
hey aho dia namaka ny samsung galaxie s3 mini efa ho 1 taona lasa izay, tonga lafatra ny zava-drehetra hatramin'ny herinandro lasa teo dia nangataka ahy ny superSU hanavao ireo bizina, efa nanandrana aho ary tsy afaka, afaka manampy ahy ve ianao?
Mamaly an'i santiagp martinez
manaikitra dia hoy izy:
miasa amin'ny rom 4.1.2 ???
Mamaly an'i morddaz
Ho an'ny firmware Samsung tany am-boalohany.
Tamin'ny 09/02/2013 06:30 PM, «Disqus» nanoratra:
namana nametraka fanontaniana ,, ny fametrahana ny 4.1.2 manala tanteraka ny loza mety hitranga tampoka ?? satria raha tsy izany dia aleonao tsy miorim-paka mba tsy hahavery antoka raha sendra misy ..
Valiny amin'i ESTEBAN
Raha ny teoria dia, mbola tsy misy tatitra fantatra momba ny fahafatesan'ny olona tampoka tao amin'ny android 4.1.2
Tamin'ny 12/02/2013 22:13 PM, «Disqus» nanoratra:
Velom-pankasitrahana dia hoy izy:
Salama Francisco, misaotra tamin'ny fampianarana, ny tena marina dia mazava sy marina tsara. Nahavita namaka ny S3 aho. Izao dia misy fisalasalana. Manana hafatra hanavao ny rafitra aho. Azoko atao izany? Ho tapaka faka aho? Inona no atahorana? MISAOTRA
Valio feno fankasitrahana
eny fa ho fongana ianao ary tsy maintsy hamerina ny dingana indray
clé dia hoy izy:
Salama! Manana S3 izay nohavaoziko ho 4.1.2 aho ary namaka azy io fotsiny satria manana olana amin'ny Google Play Store. Mbola manana olana ihany izy. Ary sendra tsy hitanao izay olana mety hitranga sy ny famahana izany?
Mampijanona ny fampiharana fotsiny izany rehefa manokatra azy aho.
Valiny tamin'i Cle
cygnus dia hoy izy:
esory ny app, avy eo vonoy ny telefaona mandritra ny 10 segondra, atodiho ary voavaha ny lesoka. Izany dia nitranga tamiko tamin'ny galaxy note 10.1
Mamaly an'i cygnus
Salama! Ny S3-ko tsy hoe manana olana amin'ny fivarotana ihany fa milaza hoe "com.google.process.gapps" nijanona ..... raha afaka manampy ahy ianao dia tena tiako izany.
Mamaly an'i cle
Claudio Mauricio Letzkus Almen dia hoy izy:
Nanao ny zava-drehetra aho ary izao tsy mihetsika ny S3, mijanona hatrany amin'ny jiro fa tsy misy zavatra hafa, misy mahalala ny famahana izany ve ???
Valiny tamin'i Claudio Mauricio Letzkus Almen
piraty nougat dia hoy izy:
ary ny rakitra hafa dia mendrika
Mamaly an'i turronpirata
Javier Rodriguez dia hoy izy:
Salama fa ho an'ny sgs3 an'ny orinasa manokana any Arzantina.
Valiny tamin'i Javier Rodriguez
Sergio Rojas Mora dia hoy izy:
misaotra amin'ny root tsy misy olana amin'ny S3
Valiny tamin'i Sergio Rojas Mora
amin'ny ahy tsy mahomby izy, mivadika mena
Mamaly an'i abel
Ovao ny port USB, indraindray mitranga fa tsy mifandray tsara ilay seranana ampiasaina. Tamin'ny 08/03/2013 18:56 PM, «Disqus» nanoratra:
hello francisco manana fanontaniana hongotako ny s3 aho, napetrakao ao amin'ny pc ahy ireo mpamily usb farany tsy tonga miaraka amin'ny KIES ve dia hoe afaka vitan'izy ireo amin'ireo ve sa mila apetrako ireo asehonao ao amin'ny tutorial ?????
Mamaly an'i jorge antonio
Amin'ny faneken'i Kies ilay fitaovana, dia ampy izay.
ROBER dia hoy izy:
Misaotra betsaka anao tamin'ny tutorial fa nataoko ny dingana rehetra ho an'ilay taratasy tamin'ny alàlan'ny galaxy s3 kinovan'ny Android 4.1.2 dia vita izany rehefa notantarainao izany fa taorian'ny namerenanao azy dia tsy tao amin'ilay mpitantana fampiharana ilay fampiharana "supersu" noteneninao. Na izany na tsy izany dia nampidina ny rindranasa "Root Check" aho hanamarinana raha manana fidirana amin'ny faka aho ary nanamarina fa TSIA ... Manana hevitra ve ianao hoe inona ny olana?
Valiny tamin'i Rober
Nomena anao ve ny Odin Pass?
Tamin'ny 9 martsa 2013 10:08 PM, Disqus nanoratra hoe:
Robert Amorós Linares dia hoy izy:
Ary heveriko fa napetraka ny app antsoina hoe cwm manager ... mety ho izy sa tamin'ny fisintomana ny "root chect"?
Valiny tamin'i Robert Amorós Linares
Mety izany, avereno indray ny fizotrany ary lazao amiko.
Ok, averiko indray ... izao dia milaza zavatra aminao aho ...
Ity ilay rakitra ampiasaiko… DesktopRoot SamsungCF-Root-SGS3-v6.4.tar
Nahazo ny pass aho tao anaty boaty maitso iray ankavanan'ny efijery ary azoko ireto angona ireto:
Maotera Odin v.3 (ID: 8) ..
Famakafakana rakitra ..
Makà PIT amin'ny sarintany ..
Manomboka ny fanavaozana ny mikirao praogramanao ..
Manorata fanombohana NAND !!
Vita ny kofehy rehetra. (nahomby 1 / tsy nahomby 0)
Natomboka indray ny finday… hitako izao ny Supersu !!
(Heveriko fa ny olana dia ny nitadiavako azy tao amin'ny «manager app fa tsy tao anaty boaty araka ny nolazainao ... azafady) no niditra tao« supersu »fa manontany ahy izy:« Mila manavao ny binariary SU. manohy?…. inona no holazaiko azy ireo?
Hanavao ny binaries ary mankafy root.
Misaotra betsaka, miarahaba anao aho noho ny fampianarana ... vaky volo ianao.
Manantena aho fa tsy ho ela dia hahita tutorial momba ny fomba hampifanarahana ireo fampiharana eo amin'ny Samsung ... (finday sy tab) ... Nahita maromaro aho fa hitoky bebe kokoa amin'ny iray aminareo aho hehehe
Misaotra betsaka indray ary arahaba.
faniriana dia hoy izy:
Izaho dia efa namaky dinika maro samihafa momba ny lohahevitra lasa faka ary ny fanontaniako dia ho an'ny ELKC sa SHE ve io ?????
misaotra anao aloha
Valiny amin'ny wishesg
Miarahaba, nanao ny dingana rehetra aho ary nilaza i Odin fa LASA !! Amin'ny jiro maintso fa rehefa natomboka indray ny telefaona dia tavela tamin'ny fàfana mainty mampiseho ny fandraisana an'i Samsumg GalaxySIII ary tsy misy fanampiana maika hafa intsony
Eve ruiz dia hoy izy:
Tsy miseho ilay application "supersu" lazainao ... Narahiko daholo ny dingana rehetra
Valiny tamin'i Eve Ruiz
Miseho io amiko
Avelao ny CS ..
Maotera Odin v.3 (ID: 3) ..
Tsy afaka manokatra ny seranana serial (COM).
Vita ny kofehy rehetra. (nahomby 0 / tsy nahomby 1)
Avereno indray ny fizotrany manontolo amin'ny fanovana ny tariby usb amin'ny takelaka hafa amin'ny PC
Efa nataoko tamin'ny usb rehetra fa ny odin tsy mahita an'io rehefa misintona
Atsaharo ny mpamily ary avereno indray ny PC
Tamin'ny 14/03/2013 18:21 PM, «Disqus» nanoratra:
Efa nanao aho ary tsy nisy
ny rakitra dia
Miala tsiny fa
Manandrana hatrany aho ary tsy mandeha izany
Hanana zavatra hatao izay tsy misy sim
WB dia hoy izy:
Raha misokatra ny kies dia akatony, ny zavatra mitovy no nanjo ahy, fa satria rehefa nampifandray ilay telefaona aho dia nanokatra kies lite ho azy, fa rehefa nanidy azy aho ary nanandrana indray niaraka tamin'i Odin, Lavorary daholo!
escuderet dia hoy izy:
ooh misaotra tonga lafatra tamin'ity fanehoan-kevitra ity ny zavatra mitovy amiko
Francisco efa azoko atao ny mamaka azy io ary manala ny sary famantarana an'ny mpandraharaha aza, saingy lasa amin'ny Android 4.0.4, ahoana no fanavaozako azy?
Francisco dia efa nahavita nanongotra azy ary namoaka ny sary famantarana ny mpandraharaha aza fa sisa novoariko 4.0.4 rehefa manavao azy aho
Ny zavatra tsara indrindra dia ny fametrahana ny fanarenana novaina dia mampirehitra rom efa masaka ianao.
Tamin'ny 15/03/2013 13:48 PM, «Disqus» nanoratra:
Azonao hazavaina ve ny fomba fanaovana azy?
ahoana no nanaovanao azy? Manana izany lesoka izany aho tmb
Wilson Reinoso dia hoy izy:
Salama, azafady, azonao atao angamba ny manampy ahy. Te-hampihena ny jb 4.1.2 ka hatramin'ny ics aho nefa mijanona anaty ampahany amin'ny system.img ary efa eo mandritra ny ora maromaro ary tsy vita ny fizotrany .. inona no tokony hatao Ataoko ..
Ampidiro CS ho MD5 ..
Zahao MD5 .. Aza esorina ny tariby ..
Vita ny fahombiazan'ny MD5 ..
Maotera Odin v.3 (ID: 5) ..
Valiny tamin'i Wilson Reinoso
Salama, misaotra tamin'ny tutorial fa fanontaniana iray, manandrana manomboka amin'ny maody fanarenana aho saingy tsy afaka. Atambatro ny lakile ary manana safidy 2 vol aho - manomboka ara-dalàna ary vol + se keda amin'ny maody dowloading ...
Luis Angel Rivera Poma dia hoy izy:
Ankino aho fa tsy hanana fahafatesana tampoka !!!!!!
Valiny tamin'i Luis Angel Rivera Poma
msdn dia hoy izy:
Salama, ahoana no ilazako aminao fa ny Samsung S3 dia mandefa ahy io foana rehefa te-hamaka azy aho?
mety misy olona manazava amiko ny zava-mitranga
Mametraha rakitra PIT ..
AZA ATOKO NY TARGET !!
Tsy afaka manokatra ny fisie voalaza. (Andalana: 1876)
Mamaly an'i msdn
Salama, niasa lavorary ho an'ny samsung s3 tamin'ny 4.1.2, misaotra betsaka !!
Uri dia hoy izy:
Salama Francisco !! Tsy fantatro izay nataoko fa tsy mivoaka izany. Izao no miseho:
ny terminal dia mitohy amin'ny tabilao mainty izay isehoan'ny android amin'ny fisintomana ...
Aza vonoina ny kendrena !!
miarahaba ary misaotra!
Mamaly an'i Uri
Salama Francisco !!
Tsy maintsy manana olana aho, narahiko ireo dingana fa misy zavatra tsy mety ao amin'ny odin hita izany:
Nanandrana nanova ny usb aho fa ny mijanona eo ihany. raha mbola mitohy amin'ny sakan'ny fampidinana ny s3.
Inona no azoko atao ???
Oscar Manqueros dia hoy izy:
Nisy zavatra nitovizany tamiko, sendra tsy namoha ny kies ianao? Natsipiko io hadisoana io noho ny fisokafan'ny kies. Niverina ny telefaona ary nifandray, manokatra odin ianao, manidy ny kies, mamono ny telefaona, miditra ny maody ianao, mahafantatra an'i odin ary manao azy ianao,
Valiny tamin'i Oscar Manqueros
Nandeha araka ny tokony ho izy ny zava-drehetra, saingy manana olana aho, rehefa averiko indray ny solosaina, ary miditra amin'ny cwm aho, mahazo hafatra aho, «Ity kinovan'ny mpitantana CWM ity dia tokony hampiasa CF-CWM v 1.1 na vaovao kokoa. Toa sitrana hafa ianao izao. Tsy nety ny fiasa isan-karazany »Mety hiteraka olana ve izany?
Salama, afaka namaka tamim-pahombiazana ihany aho tamin'ny farany, ho anao izay nitranga zavatra toa anao koa, ny nataoko dia akaiky odin, sokafy indray ary tonga lafatra daholo ny zava-drehetra.
Ankehitriny ny fanontaniako dia hafa, fantatro fa tsy misy ifandraisany amin'ny lahatsoratra izany fa vaovao aho amin'ity ary manana traikefa be dia be ianao. Ho hitanao, raha vantany vao vita ny fotony dia nitady ny hahazo CyanogenMod aho, nandefa zip maromaro tao amin'ilay pejy aho. Asta any tsara, fa rehefa handeha handika ny karatra SD misy ny terminal mifamatotra amin'ny pc aho dia mahazo lesoka ary tsy mamela ahy. Andao hojerena raha afaka manome tariby amiko ianao.
namana tsara, mila fantariko raha amin'ny alàlan'ny fotony no antony nanovana ny toetran'ny fitaovako? na mijanona amin'ny toetoetra ara-dalàna ny manohy mandray fanavaozana amin'ny alàlan'ny OTA… Manana 4.1.2 baseband 19300XXMA1 aho ary laharana fanangonana JZO54K.19300XXEMA2 Miandry ny valinteninao aho… arahaba misaotra
Afaka manohy mandray fanavaozana ara-dalàna ianao, ahoana raha tsy maintsy fantatrao fa very ny antoka azo antoka amin'izany.
Tamin'ny 26 martsa 2013 16:57 PM, Disqus nanoratra hoe:
Percy Roy Ramos Rodriguez dia hoy izy:
Manana Android 4.1.2 amin'ny Android galaxy s3 aho, novakiako fa ny fahafatesana dia tsy nisy fiatraikany tamin'ity kinova android ity, saingy manomboka mihantona intelo isan'andro ny s3 ahy, manampy anao hieritreritra miaraka aminy faka io dia hamaha ny olana ?
Valiny tamin'i Percy Roy Ramos Rodriguez
Andre dia hoy izy:
Toy izany koa no mitranga amiko 🙁 Tsy haiko ny antony, fa nesoriko ilay rindranasan'ny tweeter ary nijanona tsy niraikitra toy ny blackberry aho. Tsy haiko raha izany ary raha afaka manampy anao :(.
Valiny tamin'i Andre
Francisco Giraldez dia hoy izy:
Salama Francisco. Namaka ny galaxys3 aho ary tsy mahazo ilay supersu. Ny rindran-damina root rehetra dia manome ahy olana, voasakana izy ireo, ohatra, root manager. Naveriko ireo dingana ho an'ny root fa ny olana dia mijanona. Azoko esorina ve ny maha-faka ahy? Misaotra anao ary miala tsiny amin'ny tsy fahalalako.
Valiny tamin'i Francisco Giraldez
Miezaha manandrana seranan-tsambo usb hafa ary raha te hiverina amin'ny firmware am-boalohany ianao, apetraho izay kinova hita ao amin'ny sammobile.com
Salama, efa nanao izay nolazainao aho fa tsy hitako ny maodelin'ny terminal ahy. Manahy aho satria amin'ny ambaratonga ambany azoko amin'ity dia heveriko fa maika aho. Azafady fa mila anao aho manampy ahy hamaha azy. Fantatro amin'ny hevitra ao amin'ny bilaoginao fa miahy momba ny fanampiana ianao. Misaotra betsaka indray ary manantena ny valinteninao aho.
Lohahevitra: [androidsises] Re: Samsung Galaxy S3, Root ary fanarenana amin'ny Android 4.1.2
Salama, nanaraka ny dingana rehetra aho ary tena nandeha tsara izany nefa izao rehefa manomboka mampiasa telefaona aho. tsipika fandaharana dia nanomboka nipoitra teo amin'ny efijery fa mandeha tsara ny telefaona fa tsy mijanona ny fisehon'ny fandaharana
Tonga lafatra !!
Salama valiny Francisco mijery andro iray ka hatramin'ny manaraka ny tablette acer a500 ahy dia miraikitra amiko ny logo acer andramako ny fametahana azy amin'ny alàlan'ny lakilen'ny herinaratra sy ny bokotra ambany ary mahazo ilay rajako android misy telolafy mena aho ary nanandrana nampidina zavatra ho an'ny sd fa tsy misy ... Satria fantatrao bebe kokoa, azonao atao ny manampy ahy, tiako ny mankasitraka azy, misaotra betsaka. Avelako ho anao ny mailako mba hahafahanao mamaly ahy .. lmincone@gmail.com
Mamaly an'i Luigi
Farid Villacis Leiva dia hoy izy:
Salama, manana olana amin'ny GS3 aho, mety hisy lalao vitsivitsy (ady maoderina 4, N: O: V: A3, PLANTS VS ZOMBIES, ankoatry ny hafa), novakiako fa afaka manampy ahy ny 3D Chainfire, saingy napetrako izy io ary natomboka indray ny findaiko ary tsy nihoatra ny sary famantarana (samsung galaxy siii) naveriko tamin'ny laoniny ny angon-drakitra ary mijanona ho toy izany ihany izy, raha fantatrao fa misy azafady mba ampio aho. Misaotra
Valiny tamin'i Farid Villacis Leiva
Emmanuel dia hoy izy:
Ny ampahany amin'ny rafitra dia voahidy. Tsy maintsy manisy vy amin'ny romana ianao. Izany dia nitranga tamiko tamin'ny mm2. Nanova ny firmware aho ary nanao hadisoana tamin'ny fahazoan-dàlana. Mijanona ao amin'ny bootanimation toa anao aho. Noho izany dia tsy maintsy nanisy vy aho.
Valiny tamin'i Emmanuel
Manuel Fernandez dia hoy izy:
Ahoana ny ironanao ilay rom manana ahy Mini s3 ary zavatra mitovy amiko no mitranga, tsy mavesatra ny rafitra fa mandeha amin'ny fomba fanarenana fotsiny.
Valiny tamin'i Manuel Fernández
Misorata anarana amin'ny sammobile ary ampidino izay rehetra ilainao handefasana ny firmware farany ho an'ny terminal anao, mba hamerenanao azy miaraka amin'i Odin.
Tamin'ny 28/04/2013 06:00 PM, «Disqus» nanoratra:
Irving dia hoy izy:
hoy aho maty ny sela ary galaxy samsun irery ihany no mivoaka ary maty tsy miasa intsony na tsy misy fitoniana intsony
Valiny ho an'i irving
Izaho no Habanero dia hoy izy:
Salama. Misy afaka manampy ahy ve? Miezaka mamaka aho ary tsy avelany. manohitra ny telefaona. ary azoko ity hafatra ity.
Tsy nahomby ny fandidiana (Soraty).
Manana sansun galaxi SIII mini aho (GT18190)
Mamaly an'i Soy Aquel Habanero
Ary izao dia hay fa tsy navelany akory aho handrehitra telefaona ara-dalàna ny busff dia mikorontana aho. misy olona afaka manoro ahy izay tokony hataoko.
htcmaniaco dia hoy izy:
tsara. Manana Vodafone S3 nohavaozina aho amin'ny alàlan'ny ota ho an'ny kinova 4.1.2 ary rehefa apetrako ny kaody manokatra dia tsy fantany izany. Raha miorim-paka aho dia hanaiky azy ve?
Mamaly an'i htcmaniaco
Hoy i odin hoe tsy mahomby aho, azoko atao ny mamoaka ny finday na mamono azy ary mamerina azy io toa tsy nanao na inona na inona aho, normal ho ahy ve izany?
Azafady azonao atao ve ny mamaly ahy fa tsy hitako izay hatao amin'ny telefaona finday amin'ny maody fampidinana
enmanuel dia hoy izy:
tsara fa manana s3 gt-i9300 aho fa tsy nivadika nividy bateria hafa aho ary omeko ny bokotra herinaratra ary mijanona ao amin'ny samsung galaxy s3
Mamaly an'i enmanuel
Tonga lafatra ny zava-drehetra, tsy olana rehefa faka
Salama, te hahafantatra aho raha mitombina amin'ny s3 mini gt 18190NXXALL4 4.1.2 ny Chianfire CFR ary koa raha mila mampifandray azy amin'ny kies aho, satria nampifandraisiko voalohany tamin'ny pc io ary nanomboka nanao karazana fametrahana ary tsy haiko raha ampy hahafantarana ireo mpamily izany
Salama, aorian'ny fanaovana ny faka, tsy mihetsika ny wifi, hainao ny manamboatra an'io olana io, tiako ny fanampiana anao.
Gustavo Garcia dia hoy izy:
Manana izany olana izany aho. Misy ny manana vahaolana ...
Valiny tamin'i Gustavo Garcia
Tinchus2009 dia hoy izy:
Salama. Nanaraka ny torolàlana aho ary tonga lafatra! Manana fanontaniana aho izao: rehefa miditra ny safidy hanavao na handinika ny fanavaozana an'i samsung aho dia milaza amiko fa novaina ny fitaovana ary tsy azo havaozina izany. Fa maninona no ary ahoana no hamahako azy? Tsy afaka manavao ny telefaona amin'ny fanavaozana izay Samsung sanque aho?
Valiny tamin'i Tinchus2009
Wilfredo vega dia hoy izy:
Miarahaba. Manana galaxy three aho ary tiako ho fantatra raha misy fomba hamadihana na hamonoana ny bokotra finday angona raha tsy mila miditra ao anaty fikirana. Angamba fampiharana sasany mamela ahy hanao izany amin'ny efijery lehibe. Tiako ny info.
Valiny tamin'i Wilfredo Vega
Hitanao izany ao amin'ny bara fampandrenesana, izay misy ny bokotra rehetra on sy mivoaka.
Daniel Candel Martinez dia hoy izy:
Hatramin'ny nanoratako ny telefaona dia tsy mampifandray ahy amin'ny kies izy io, mijanona mandritra ny fotoana fohy ho «Connecting ...».
Valiny tamin'i Daniel Candel Martínez
salama manana olana aho te-hongotako ny s3 ary rehefa tao Odin aho dia tsy nahomby ary nijanona tao anaty mode download ny vahindanitra, inona no azoko atao amin'ity tranga ity
Stefan Abarza dia hoy izy:
Manamboatra ny olana amin'ny Samsung Galaxy S3 ve izany?
Ny olana dia mangatsiaka irery izy ary raha hiasa indray izy dia tsy maintsy vonoiko sy ho faty?
Valiny tamin'i Stefan Abarza
wako dia hoy izy:
Salama, ilaina ve ny fandefasana USB debugging ???
Mamaly an'i wako
leo cepeda dia hoy izy:
Fanontaniana iray aorian'ny fanaovana ireo dingana rehetra ireo dia mahazo fanavaozana rindrambaiko indray ny telefaona
Mamaly an'i leo cepeda
Eddie dia hoy izy:
Nanaraka ny dingana tao amin'ny fampianarana aho ary nilamina ny zava-drehetra .. misaotra betsaka
Mamaly an'i Eddie
Manana ny ozinina Galaxy S3 tany am-boalohany aho, ny kinova 4.1.2, ny ashpalt 7, ny batman, ny maoderina 4 dia tsy manokatra azy ireo, misy efijery mainty toa manandrana mameno. Misy mahay mamaha azy ve ???
Tsy miorim-paka ny s3-ko ary tiako apetraka amin'ny maody fanarenana izany ary tsy manala hafatra milaza fa nahita olana ity firmware upradge ity. AZO ATAO AZO IZAY ATAO
Valiny amin'i JAIME
Salama Francisco, nanao ny fotony aho ary tonga lafatra ny zava-drehetra, afa-tsy rehefa te-hamono na hamerina amin'ny alàlan'ny menio amin'ny alàlan'ny bokotra ankavanana aho dia mihamangatsiaka ny telefaona finday ary tsy maty, inona izany?, Miarahaba anao na tutorial lehibe.
Leito Rulo dia hoy izy:
Eny, ny baterian'ny s3-ko dia maharitra antsasaky ny faharetany. Azoko atao tsara ny manamboatra ny super su na tsy mikasika azy aho, azoko esorina ve ???
Valiny tamin'i Leito Rulo
Ana Maria dia hoy izy:
Salama, ny Samsung s3 ahy rehefa mandeha aho dia mijanona ao amin'ny efijery fiarahabana amin'ny telefaona, izay mampiseho ny marika, ary mijanona hatrany, mihodina ary mihodina. Inona no azoko atao?
Valiny tamin'i Ana Maria
LapJohn dia hoy izy:
Namana grax maro !!!
Ny prfct rehetra, ao amin'ny SGS3 4.1.2 JB
Valiny tamin'i LapJohn
Mario Torres dia hoy izy:
HELLO ROOTE NY S3 GALAXY-NY ARY IZAO NY WIFIAKO TSY MANDEHA AMIN'NY ZAVA-DEO DIA ATOKO AZO IZAO DIA MAMONO AZY SATRIA IZY
Valiny tamin'i Mario Torres
Efa voavahao ve? Androany dia mijanona ny tenako 🙁
Manala ny olan'ny fahafatesana eo noho eo ve izany?
ranom-boankazo dia hoy izy:
Salama!!!! maika !!!! Nihitsoka aho rehefa namaka ny s3 nataoko tamin'ny dingana fanaovana sarintany endrika Get PIT !! Inona no azoko atao?
ID roa: com Nahita ahy ny ODIN, olana ve izany?
Mamaly an'i suco
Atsaharo ny USB, ampifandraiso amin'ny seranana hafa izy ary avereno ny dingana
Paty1184 dia hoy izy:
Toy izany koa no mitranga amiko !!! Amin'ny alàlan'ny fanampiana mahery! Tsy manapaka na tsy ny Finday aho.
Valiny ho an'i Paty1184
Izany dia satria nanamarina ny boaty RE-PARTITION ianao, miandry ny zava-drehetra ho vita na tsy hahomby ary manandrana manao ny dingana rehetra indray hatrany am-piandohana.
Fiarahabana avy any Venezoelà…
Nametraka roon 4.2 avy amin'ny firenena hafahafa tamin'ny findaiko izy ireo.
Ankehitriny te-hametraka iray hafa tsy azoko atao aho, satria tsy mifandray amin'i Kies ny telefaoniko ... Tsy azoko atao ny mamantatra azy, vitako ny zava-drehetra, ahoana raha manova ny pcs aho, ahoana raha, ovay ny tariby usb ... amin'ny farany ...
fa tsia, tsy mampifandray ahy io. !! Raha tsy mahatanteraka izany dingana voalohany izany aho dia tsy afaka mankany amin'ilay dingana izay manaparitaka ahy ...
Tena kivy aho
Salama, manandrana mihodina aho ary manome ahy ity lesoka ity, inona no hataoko?
Maotera Odin v.3 (ID: 4) ..
Mamaly an'i escuderet
voavaha fa nosokafako ny kies
Pedro Peña dia hoy izy:
Tsy nety tamiko izany, tsy miditra amin'ny maody fampidinana
Valiny tamin'i Pedro Peña
Tsy miditra ao amin'ny maody fampidinana izy, azafady mba ampio.
Marlboro dia hoy izy:
Salama, ny app supersu dia tsy napetraka ary tao odin dia niseho aloha ny teny reset ary rehefa afaka minitra dia mandalo ny teny, inona no hataoko?
Mamaly an'i marlboro
Efa naveriko daholo ny fizotrany ary mitohy ny zavatra mitovy, olona afaka manampy ahy azafady.
manuberto dia hoy izy:
Navoaka ho an'ny orinasa ny finday? Misaotra anao
Mamaly an'i manuberto
Humberto dia hoy izy:
Tsara ny tolak'andro Francisco fanontaniana iray, miorim-paka ny solosainako, raha manavao ho azy aho dia fantatro fa nofoanana ny faka, marina ve izany? Inona no mitranga raha esorina ilay fakany, tsy mandeha intsony izy na miverina amin'ny fanahafana azy teo alohan'ny hamongorana azy, izany hoe, miaraka amin'ny fikirakirana ny orinasa an-tarobia, misaotra
Valiny tamin'i Humberto
Joaquin Rovira dia hoy izy:
Niorina tamin'ny odin sy ny fakitera CF-Root nataoko ny galaxy S3-ko dia nataoko tsara.
Nahazo SuperSU aho saingy heveriko fa nohavaozina ny terminal ary tsy mamela ahy hiditra amin'ny SuperSU intsony.
Izao dia milaza amiko fa tsy maintsy mametraka ny binaries aho ary hamaka tanana indray. Ahoana no anaovako azy?
Valiny tamin'i Joaquin Rovira
hekoz dia hoy izy:
Azonao atao ve ny manampy ahy hijery ny s3 mini lp nataoko, nanandrana namaka tamin'ny odin aho saingy tsy nahomby! Ary nanidy ny zava-drehetra aho ary hitako ny sela tamin'ny bateria ary manjaka aho fa avy eo lasa miadana izy ary tsy manome fifandraisana USB amiko izao, tsy omen'ny telefaona ahy ny pc, tiako holazaina fa ny sela ihany no miakatra, izaho aza manana ny safidin'ny fifandraisana multimedia na ny ptra k elojes vao mahazo entana ary milaza ny pc fa tsy fantatro izany, azoko atao, azafady ampio aho
Valio i hekoz
Susanne barrada dia hoy izy:
Izaho dia manana samsung galaxis Sii eo amin'ny efijery Ny fampidinana dia aza mamono ny tanjona tokony hataoko
Valiny tamin'i Susanne Barrada
Ron dia hoy izy:
bns ny olako amin'ny S3 dia ity manaraka ity fa tsy mirehitra noi tsy manao na inona na inona ary avy amin'izay novakiako dia fahafatesana tampoka
ary raha tsy mirehitra na tsy manao na inona na inona ilay dingana fanesorana USB dia tsy azo atao amin'izany
Mamaly an'i ron
Jorge gonzalez dia hoy izy:
Nividy S3 ampiasain'ny SXNUMX aho ary rehefa tonga tany an-trano dia te hifandray amin'ny WiFi ary milaza izany fotsiny fa lesoka fanamarinana, efa noraisiko izy hanoratra ary tsy hitan'izy ireo fa diso ny fahafantaran'ny olona iray azy. izaho, tsy haiko izay hatao
Valiny tamin'i Jorge Gonzalez
Maty ny finday, tsy mandeha izy io ary alohan'ny hamonoana azy. Nivoaka ny android ary tsy mandeha izany, inona no hataoko?
Mamaly an'i san
mankany amin'ny trano fandroana dia hoy izy:
ny s3, toy izany koa maty
Niditra tao amin'ny maody fampidinana ny telefaona ary nilaza fa aza vonoina ny lasibatra, mila wifi izy hanatanterahana io asa io.
eo ankavia dia miteny hoe:
anarana mpamokatra gt-19300i
binary concur: sansung ofisialy
azo antoka dowload: mamela
inona no tokony hataoko.?
Valiny amin'ny Albaney
joslen dia hoy izy:
Salama francisco… rahalahiko manana S3 I9300 aho ary manana lesoka izy ka tsy afaka miantso aho dia antsoiny fotsiny hoe EMERGENCY CALLS izay azoko atao mba hamahana azy ……
Mamaly an'i joslen
Bq Aquaris, ivon'ny famokarana Espaniola
Samsung Galaxy S3, ny fomba fanamboarana ny olan'ny fahafatesana tampoka